Aya maitiro gumi nematatu eIOS achaita kuti hupenyu hwako huve nyore, usaapotsa | IPhone nhau
Aya maitiro gumi nematatu eIOS achaita kuti hupenyu hwako huve nyore, usavatadza
Sezvaunoziva, Isu tanga tichiedza iOS 13 zvakadzama kwemavhiki akati wandei, Isu tinoita izvi nekuti isu tinoda kukuzivisa iwe pamusoro penyaya dzinonakidza kwazvo idzo iyo Cupertino kambani inofunga iwe ne iPhone yako. Ino nguva isu tinounza akateedzana ehunyanzvi ayo asingaonekwe muIOS uye izvo pasina mubvunzo zvichavandudza hupenyu hwako hwezuva nezuva uye kugadzirwa kwako.
Tsvagurudza nesu ndeapi matanho anonyanya kunakidza eIOS 13 ayo akarerutsa mashandisirwo ayo uye ausina kunyatso kuziva, Uri kuenda kugara usina kuvawana? Ndine chokwadi nazvo zvikuru… Enderera mberi!
Iwe unogona kuziva mamwe eaya manomano kana isu takatombotaura nezvawo kare, Asi chinangwa ndechekuunganidza pano ndedzipi nhau dzinonakidza kwazvo kuti iwe uzive kuti iOS 13 ichachinja sei mashandisiro aunoita yako iPhone, nekuti chinangwa chekupedzisira nechimwe nechimwe chezvigadziriso zveIOS hachisi chete chekuti chinoshanda zvirinani kana nekukurumidza , zvakangofanana nekuwedzera mashandiro, kunyanya mamwe ayo vashandisi vanga vachitsvaga kwemakore mazhinji.
1 Iwe unogona pakupedzisira kushandura netiweki yeWiFi kubva kuControl Center
2 Wakaneta nekuvandudza maapplication ausingashandise? Vadzime kubva kuApp Store
3 Saita spam kufona, bvisa dzakavanzika nhamba
Iwe unogona pakupedzisira kushandura netiweki yeWiFi kubva kuControl Center
Iyo Control Center yakawana hunyanzvi hutsva mushure mekuvandudzwa kweIOS 12, uye pamusoro pezvose nekuda kweiyo 3D Kubata kugona iko iko kunowanikwa pane ese maIOS zvishandiso zvisinei nekuti vane Hardware inodiwa kana kwete. Kwenguva yakati ikozvino tinogona kutsikirira nesimba kana refu paiyo WiFi icon muDirect Center uye izvi zvakatibvumidza kuti tione nekungotarisa iyo yeWiFi network yataive takabatana nayo, zvisinei, izvi zvachinja kugutsa zvikumbiro zvevashoma vashoma vevashandisi.
Kana isu tavhura iyo inodzora nzvimbo uye nekuwedzera iyo yekubatanidza ruzivo, ikozvino kana isu tikaita refu yekudhinda oiIsu tinokumbira iyo 3D Kubata pamusoro peiyo WiFi icon, isu tichakwanisa kuona runyorwa rweanowanikwa maWiFi network uye nekudaro tinokwanisa kusarudza iyo yatinoda zvakanyanya. Aya hapana mubvunzo akanaka akanaka, kunyanya kana tiri kumba, uko kuri kuwedzera kuwanda kuva nemhando mbiri dzemitambo, yakajairwa 2,4 GHz WiFi network uye ne5 GHz network iyo inopa yakakwira yekubatanidza kumhanya muKukuvadza renji renji, hatigone kuti isu tanga tisingatarisire kuita basa idzva iri.
Wakaneta nekuvandudza maapplication ausingashandise? Vadzime kubva kuApp Store
Nguva zhinji tinotokanganwa kuti isu tine chikumbiro chakaiswa. Zvinotipa chechokwadi cheki patinopinda muApple App Store uye nekuenderera mberi nekugadzirisa. Ndipo patinozvibvunza isu: "Uye nei ndakaisa application iyi kana ndisina kuishandisa kwemakore mashanu?". Space yakakosha pane yedu iPhone kunyangwe Apple ichivimbisa kuti kunyorera kuchayera katatu kushoma. Saka ikozvino isu tichakwanisa kutora matanho zvakananga kubva kuchikamu chekuvandudza cheIOS App Store, isu tinorevei neizvi?
Zvakanaka ikozvino kugadzirisa mashandisirwo muIOS isu tichafanirwa kudzvanya paprofile yedu kumusoro uye zvichatitora isu kuenda kuchikamu uko tichaona zvakamirira kunyorera kuti tiise. Izvi zvinoitwa naApple nechinangwa chakajeka, kuti isu tishandise otomatiki zvigadziriso kutiponesa iyi yakaoma nzira. Nekudaro, kana iwe uchiri kusarudza kumisikidza maapplication nemaoko, Apple inokutendera kuti uibvise pa stroke kana iwe uchiona kuti haudi kuida, nekuti izvi isu tinongofanirwa kutsvedza kubva kurudyi kuenda kuruboshwe pamusoro pechishandiso uye basa rekuti "bvisa" iro application richaonekwa, senge patinodzima mameseji kana maemail. Nenzira iyi iwe unozokwanisa kukurumidza kubvisa iwo maapplication aunogara uchigadzirisa asi iwo ausingashandise chaizvo.
Saita spam kufona, bvisa dzakavanzika nhamba
Ndiani anga asina kunetswa pakati pekurara nguva nemutengesi wenhare anoda kukutengesera chigadzirwa chiri pabasa? Kana usati uchinyoresa kuRobinson Chinyorwa kana zviyero zvakafanana nazvo munyika mako, inguva yakanaka yekuti iwe uwane zvakanakisa kubva mukushanda kutsva uku kwakasanganisirwa neApple munhare dzayo, imwe yakanyatso kudikanwa nevashandisi nguva yakareba.nguva yakawanda. Chinozivikanwa ndechekuti makambani anoita zvekushambadzira mafoni anoita kudaro kuburikidza nenhamba dzatisina mubookbook kana nhamba dzakavanzika, nekuda kwezvikonzero zviri pachena, uye izvi zvichabatsira zvakanyanya mukana wekuvharira.
Izvo zviri nyore, iOS 13 ichatibvumidza kunyararidza zvakananga mafoni ese atinogamuchira kubva kunhamba dzisingazivikanwe, izvi zvichaita kuti mhando iyi yekufona isatinetse isu kana tiine runhare nezwi rakaitwa kana kwete, uye chete isu Tichapinda kunyangwe panguva iyoyo tiri kushandisa chishandiso uyezve, tinoshuvira kuzviita. Kuvhara mafoni ese ekushambadza pane yedu iPhone isu tinongofanirwa kuisa chikamu cheMisetingi, pinda chikamu cheTerefoni wobva wadzvanya pakunyarara nhamba dzisingazivikanwe. Izvi zvine makona maviri, uye ndezvekuti zvinonyaradza zvese kufona kubva kunhamba dzatisina mune chero bhuku renhare, uye kwete chete zvakavanzika. Pamwe ibasa iro rakanangana nekudzivirira kwevana vadiki kana Yevabereki Kudzora. Isu tinovimba kuti nekufamba kwenguva Apple ichatibvumidza kunyararidza chete nhamba dzakavanzika.
Maitiro ekuisa iyo iOS 13 beta pane yako iPhone
Kana iwe uchida kuramba uchiziviswa nezvese nhau idzo iOS 13 dzinohwanda mune yayo betas uyezve ziva nezve bvunzo dzatiri kuita nema betas akasiyana. Kune izvi iwe unogona zvakare kumira kana iwe ukaona zvakakodzera kuburikidza neyedu chiteshi Teregiramu (link) nevashandisi vanopfuura mazana masere kwaunogona kugovana zvaunowana uye nekupa mazano kune vashandisi veIOS kutenderera pasirese Kana iwe wawana hunyengeri hweIOS 800 iyo iwe yaunoda kutitaurira, tora mukana webhodhi rehomwe uye usanyara, nharaunda yese inogona kutora chikamu muIOS 13 bvunzo dzatinoita muActualidad iPhone.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Aya maitiro gumi nematatu eIOS achaita kuti hupenyu hwako huve nyore, usavatadza
Jony Ive Akazivisa Zviri Pamutemo Kusiya Apple
Apple yakavandudza watchOS 6 kurovedza nekuita kuti ive yakazvimiririra kubva kune iyo iPhone